यी दुई राशिको कहिल्यै सफल हुँदैन प्रेम र विवाह ! – Khula kura
यी दुई राशिको कहिल्यै सफल हुँदैन प्रेम र विवाह !
अमेरिका प्रवेश गर्नहरुलाई अमेरिका ले दियो यस्तो सन्देस
जुन राशिहरुबीच प्रेम वा विवाह गर्नु नराम्रो मानिन्छ ?
मिथुन र मकर: मिथुन राशिलाई मकरको जिद्दीपन र कुनै पनि कामलाई पूरा गरेरै छोड्ने बानी एकदमै मनपर्छ। यी राशिका व्यक्ति यति प्रभावित हुन्छन् कि मकर राशिले जस्तै जीवनशैली बनाउँने प्रयास गर्छ। यस्तो अवस्थामा मिथुन राशिले आफ्नो अस्तित्व र आत्मविश्वास गुमाउँने गर्छन्।
लजमा सँगै बसेका देवर-भाउजू मृत भेटिए
पार्टनरसँग टाँसिएर सुत्नुका ४ फाइदा
आज सिठी जुलुस निकाल्नु को कारण यस्तो छ प्रचण्ड–माधव समुहले
“घरमा श्रीमती छिन् युवती लिएर हो’टल पुगेका युवक को’ठामै मृ’त भेटिए पछि भयो य’स्तो (भिडियो हेर्नुस्)